Nilatsaka ny sazy henjana: naaton’ny Fifa amin’ny maha filohan’ny Caf azy i Ahmad | NewsMada
Nilatsaka ny sazy ho an’ny filohan’ny Caf, ilay teratany Malagasy, i Ahmad, noho ny fandikana sy ny tsy fanajana ny andinin-dalàna vitsivitsy mifehy ny Fifa. Naaton’ity rantsana ambony indrindra mitantana ny baolina kitra maneran-tany ity mandritra ny dimy taona izy, tsy hikitika na hisahana ity taranja ity.
Vara-datsaka ho an’ny Afrikanina sy ny vahoaka malagasy. Nifarana tamin’ny fahafaham-baraka ny taom-piasan’i Ahmad, filohan’ny kaonfederasiona afrikanina baolina kitra (Caf) sady filoha lefitry ny baolina kitra iraisam-pirenena (Fifa). Namoaka didy ny mpitsara eo anivon’ny vaomieran’ny etika mahaleo tenan’ny Fifa, omaly, fa sazina tsy mahazo mikitika na misahana andraikitra momba ny baolina kitra, mandritra ny 5 taona, i Ahmad.
Manamaloka ny Barea
Ankoatra izay, didina handoa onitra 185 000 euros na 832 500 000 Ar ihany koa ny tenany. Antony maro ny hanenjehana azy, ao anatin’izao sazy henjana izao, ka anisan’ireny ny fandikana ny andinin-dalàna faha-15 ny fitsipi-pifehezan’ny Fifa, ka nanekeny sy nizarany fanomezana na tombontsoa manokana. Teo koa ny andininy faha-20 amin’ny fanamparam-pahefana sy ny andininy faha-28, tamin’ny fanodinkodinam-bola, ho an’ny taom-piasana 2018.
Tsy hisalasalana fa manamaloka ny sary tsara sy ny zava-bitan’ny Barea de Madagascar ity raharaha maizina, mahazo an’i Ahmad, ity.
Namadika ny rafitra i Ahmad
Ny famotorana nataon’ny vaomieran’ny etika, nandritra ny fotoana nitondran’i Ahmad ny Caf, nanomboka ny taona 2017 ka hatramin’ny 2019, no nahitana fa namadika ary tsy nanaja ny rafitra eo anivon’ny Fifa i Ahmad ka nisian’ireo olana samihafa teo amin’ny fitantanany ity rafitra misahana ny baolina kitra afrikanina ity. Anisan’izany ny fandrindrana sy ny fandaminana ary ny famatsiam-bola tamin’ny fivahiniana masina, tany La Mecque. Teo koa ny firaisana tsikombakomba tamin’ny orinasa mpamatsy fitaovana fanatanjahantena, Tactical Steel, sy ny hetsika samihafa. Ankoatra ireo rehetra ireo, efa nisy ihany koa ny fitoriana azy, noho ny fanararaotana ara-nofo.
Manoloana ity sazy ity, miala tsy ho anisan’ireo kandidà hirotsaka hofidina ho filohan’ny Caf, hatao any Rabat, Maraoka, ny 12 marsa ho avy izao, izany i Ahmad.
Tsy misy afa-tsy efatra izany sisa hifampitana amin’izany. Eo ilay mpanefoefo afrikanina tatsimo, i Patrice Motsepe, ilay Ivoarianina, i Jacques Anouma, ilay Maoritanianina, i Ahmed Yahya, ary ilay Senegaley, i Augustin Senghor. Ny 12 janoary 2021 no hamoaka ny lisitra ofisialin’ireo mpifaninana nahafeno ny fepetra ny vaomiera misahana ny fifidianana eo anivon’ny CAF.
Marary ny kitra malagasy
Tsiahivina fa anisan’ireo olona voan’ny Covid-19 i Ahmad ny fiandohan’ity volana novambra ity ary mbola ao anatin’ny fialan-tsasatra sy ny fanarahana fitsaboana, amin’izao fotoana izao izy.
Etsy andaniny, efa tsy hita sy tsy mazava ny momba ny filohan’ny federasion’ny baolina kitra (FMF). Nipoitra indray koa izany izao ity raharaha ity. Marary tanteraka ny kitra eto Madagasikara.